Ithimba labahleli ▷➡️ VidaBytes | I-LifeBytes
LifeBytes iyisizindalwazi se-inthanethi ye-AB. Kule webhusayithi sazisa ngokuyinhloko izindaba, okokufundisa namasu mayelana nomhlaba wezobuchwepheshe, imidlalo namakhompyutha. Uma ungumuntu othanda ubuchwepheshe, uma igazi ligijima emithanjeni yakho itekhi bese i-Vidabytes.com iyilokho kanye okufunayo.
Selokhu yethulwa ngo-2008, i-VidaBytes ayikakayeki ukukhula usuku nosuku kuze kube ingenye yamawebhusayithi amakhulu kulo mkhakha.
Ithimba labahleli be-VidaBytes lakhiwe iqembu laba ochwepheshe bezobuchwepheshe. Uma nawe ufuna ukuba yingxenye yeqembu, unga sithumele leli fomu ukuze sibe ngumhleli.
Ukukhangisa kanye nomklami wezithombe. Ekuqeqesheni okuqhubekayo ezindabeni zezinhlelo. Ukufunda yonke into ezungeza umhlaba wezobuchwepheshe kubalulekile namuhla.
Lapho ngiqala ukuthinta ikhompiyutha ngangineminyaka engu-18 ubudala. Ngaphambi kokuthi ngike ngiwasebenzise ukudlala kodwa kusukela lapho ngakwazi ukufunda nokufunda isayensi yekhompyutha njengomsebenzisi. Kuyiqiniso ukuthi ngephule ezimbalwa, kodwa lokho kungenze ngalahlekelwa ukwesaba ukuzama nokufunda ikhodi, ukuhlela nezinye izihloko ezibalulekile namuhla.
Iphrofayela yeqembu elivamile lokubhala le-VidaBytes.
I-Update Today kwakuyiwebhusayithi enikezelwe emhlabeni wesofthiwe nezinhlelo ezijoyine i-VidaBytes eminyakeni embalwa edlule futhi okwamanje konke okuqukethwe kuhlanganiswe kule webhusayithi.
Uchwepheshe wekhompyutha ofunda umsebenzi. Isitshudeni se-Computer Systems simagange ukusiza wonke umuntu ukuthi afunde ngobuchwepheshe isinyathelo nesinyathelo.
I-Redesenred kwakuyiwebhusayithi endala emayelana namaNethiwekhi namaKhompiyutha okwamanje ayingxenye ye-Vidabytes.com